Lapho izidakamizwa ezisetshenziselwa ukuba zibonwe ngokuthi "isitha" okufanele zibhubhise ngazo zonke izindleko, abalimi kulezi zinsuku bayaqaphela ukuthi ngaphandle kokusiza ukugcina indawo enokulinganisela, izilwane zokuhlala zingasiza empeleni ukulwa nokulahlekelwa kwemfuyo. Ucwaningo luye lwafakazela nokuthi ukubulawa okungahleliwe kwezilwane ezidliwayo kungabhubhisa, okuholela kuzo zonke izinhlobo zezinye "izinkinga" nemiphumela engenhloso.
Ngakho esikhundleni sokugcina izinombolo zezidakamizwa zinciphisa izindlela zokuphatha ezingakhethi, abalimi kufanele baqonde izindlela zokulima ngokuvumelana nezilwane ezihlala kuzo futhi bahlose kuphela abantu abangela ukulahlekelwa okuqhubekayo nokuphindaphindiwe kwemfuyo.
Esinye sezizathu zokuthi kunengqondo ukunakekela izilwane zokuhlala, ukuthi iningi lezilwane ezidla izilwane ziyindawo. Ukuba khona kwabo, empeleni, kusiza ukugcina ezinye izilwane eziduni futhi, empeleni, zingaphandle kwesikhala sakho.
Ubukhulu bendawo buhlukahluka kwesinye sezilwane kuya kwesinye futhi buxhomeke ekutholakaleni kokudla. Ingwe ebusayo ingaba nensimu engaphezu kwezingu-10 000 ha, kanti le nsimu igqokwa ngaphezu kweyodwa yowesifazane. Njengoba izingwe zincintisana ngqo nezidakamizwa zokudla nokudla inyamazane, ukukhishwa kwazo endaweni, kuvame ukuholela ekukhuphukeni kwezinombolo ezinama-black and backacac.
Esinye isizathu sokunakekela izilwane ezihlala kuzo, ukuthi ukukhipha isilwane esiphezulu kungashiya ukungabi nalutho ebusweni beqembu. Lokhu kungabonakali kungagcwaliswa ngabantwana abancane, abanolwazi oluncane noma abaqashile, abanamathuba amaningi okuba nezindawo ezincane, ezigxile kakhulu futhi kungenzeka kakhulu ukuba izimbongolo, ngokusho kwe-Predators on Livestock Farms, a Practical Farmer’s Manual for Non-lethal, Holistic Ecologically Acceptable and Ethical Management, okwakhiwa nguBool Smuts ngo-2008.
Ukukhishwa okukhethiweyo kwe-African Wild Dogs, isibonelo, ngeke kuhambisane kuphela nokwanda kwezinkinga ze-jackal and caracal, kodwa kungase kuholele nasezintwaneni ezincane ze-African Wild Dogs ukungazifundi kubadala bazo ukuzingela kahle bese zibuyela emfuyweni njengomthombo wazo oyinhloko kokudla.
Ukuba ne-caracal ehlala futhi eyinhloko engeyona isitokisi "isela", uye wabonakala njengenye yezindlela ezingcono zokugcina ezinye izidumbu nezidumbu.
Ukuphathwa kabi kwezilwane ezidliwayo kungase kubuyele emuva ngezinye izindlela. Ucwaningo luye lwabona ukuthi ukushushiswa kwejackal black-backed, isibonelo, kuzoholela ekukhuliseni ubukhulu bemalitha nokuzala. Ngakho esikhundleni sokuthola abantu ngaphansi kokulawulwa, ushushiso lungabangela ukuqhuma kwabantu.
Isizinda Sokudliwayo Kwemvelo
Ukuncintisana kokunyuka kokudla ngenxa yokuthuthukiswa kwezolimo, ukuhlala kwamadolobheni kanye nesomiso kunomthelela omubi emithonjeni yokudla etholakalayo kubaduni futhi ngokuvamile kuholela ekudleni ekubuyiseleni emfuyweni yokudla. Ukuvimbela lokhu kungenzeki, abalimi kufanele balondeze ipulazi labo ngokugcwele, baqinisekise ukuthi kukhona imvelo yemvelo eyaneleyo noma umhlaba ukusekela imfuyo yemvelo yezilwane ezidla inyama kanye nokugcina imfuyo engozini emgwaqweni wePredators.